किन एकपटक स, म्भो ग गरेपछि घरिघरि गर्न मन लाग्छ ? - नेपाली खोज
यौ न चा हना हामीलाई प्रकृतिले दिएको एक विशेषता हो र सबै स्वस्थ व्यक्तिमा यौ न चा ह’ना हुन्छ । यो हाम्रो वंश निरन्तरताका लागि आवश्यक छ । यौ नस’म्ब न्धी हाम्रा चासो तथा चाहनाहरू म’स्तिष्कबाट सुरु हुन्छन् ।
म स्ति’ष्कको ज्थउयतजबबिmगक भन्ने सानो अं’ गले यौ ’नस ’म्पर्क राख्ने जस्ता आधारभूत व्यग्रता प्राणीमा उत्पन्न गर्छ भने अर्को अङ्ग Cereb’ral Cor’tex ले हामीले सिकेका कुरा तथा अनुभवहरूलाई अभिलेख राख्ने कार्य गर्छ ।
ह’ र्मोनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा Tes’tosterone को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यौ’ न व्य ग्रता वा चा हना अर्थात Lib’ido हुन यो ह’र्मो नको निश्चित मात्रा व्यक्तिमा हुनु आवश्यक
यौ ’न संवे’ दन’शील तास म्बन्धी कुराहरू पनि यसै भागबाट सञ्चालित हुन्छन् । यौ न इ च्छालाई प्रभावित पार्ने ह’र्मोनहरूको उत्पादन तथा सञ्चालनमा पनि मस्ति ष्कको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यी सबै कुराहरूको संयुक्त प्रभावबाट नै यौ’ नस’म्बन्धी क्रि’या कलापहरू निर्देशित हुन्छन् । यौ’ नस’ म्पर्क होस् वा अन्य यौ न क्रि’याकलाप ती वास्तवमा शा’रीरि क तथा मा न’सिक दुवैको समन्वयमा हुने एक जटिल प्रक्रिया हो ।
मोटामोटी रूपमा हेर्दा यौ ने ’च्छाको सञ्चालनमा विभिन्न प्रणालीहरू सक्रिय देखिन्छन् । एक त इन्डोक्रा’इन सिस्टमअन्तर्गतका रागरसहरूले सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कोतिर इन्द्रीय प्रणालीका अनि मस्ति’ष्कले । ह र्मोनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा Tes’tosterone को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यौ ’न व्यग्रता वा चाहना अर्थात Lib’ido हुन यो ह’र्मो नको निश्चित मात्रा व्यक्तिमा हुनु आवश्यक छ ।
यौ-न उ’त्ते-ज नाको सुरुवातदेखि त्यसको अन्त्यसम्मको कुरालाई हेर्दा हाम्रो शरीरमा केही परिवर्तनहरू एक निश्चित प्रकारले भएका देखिन्छन् । सो यौ न उ-त्ते जना प्रति हाम्रो शरीरले देखाएको प्रतिक्रया भएर नै यसलाई मानव यौ’ न प्र’तिक्रि या च’क्र भनिन्छ र अंग्रेजीमा ह’युमन से ’क्सु’अल रेस्पोन्स साइकल भनिन्छ । यसका ४ चरणहरू ‘Ex’citement ‘Pha’se, Pla’teau Ph’ase, Org’asm Phase tyf Resol’ution Phase हुन् ।
यो प्रणालीले हामीलाई सु ख वा आ न न्द दिने कुरा तिर निरन्तर आकर्षित गर्छ त्यो खाना, न’शालु व’स्तुको प्रयोग होस् वा यौ’ न स’ म्पर्क । त्यसैगरी दु:ख वा पी’डादायक कुराबाट टाढा बस्न लगाउछ
हामी किन बारम्बार यौ -न स-म्पर्क रा’ख्न ला’लायित हुन्छौं त?
हामीले मानव यौ न प्र’तिक्रिया च’क्रलाई केलाएर हेर्‍यौं भने त्यसमा प्राप्त हुने सुखलाई स्वर्गीय सुख भनिन्छ, त्यसैले यसलाई चर-मसु ख नै नाम दिइएको छ । भनिन्छ, यो मानवले प्राप्त गर्ने सुखहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम सु ख हो । त्यसैले यो स्वाभाविक हो कि कुनै पनि व्यक्ति यस्तो सुख प्राप्त गर्न लाला-यित हुन्छन् । उसले सो सुख पुन: प्राप्त गरेमा उसले सो सुख फेरि पनि प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छ र यसले निरन्तरता पाउँछ ।
यो कसरी सञ्चालित हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा पनि एकपल्ट नियालेर हेरौं । यस्ता प्रक्रियालाई सञ्चालन गर्ने पुरस्कार प्रणाली (R’eward system) भनिन्छ । यो प्रणालीले हामीलाई सु ख वा आ नन्द दिने कुरा तिर निरन्तर आकर्षित गर्छ त्यो खाना, न’शा-लु व’स्तुको प्रयोग होस् वा यौ नस र्क । त्यसैगरी दु:ख वा पी’ डादा-यक कुराबाट टाढा बस्न लगाउाछ । यस क्रममा हाम्रो म’स्तिष्कको विभिन्न भागबाट हुने कार्यको संयोजनको कार्य भने क्तचष्बतगm भन्ने भागले गर्छ ।